Home Wararka Maydad iyo dad ku soo dhaawacmay shil gaari oo la geeyay Cisbitaalka...
Maydad iyo dad ku soo dhaawacmay shil gaari oo la geeyay Cisbitaalka Hargaysa
Laba qof ayaa ku dhintay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen, kadib shil gaadhi oo ka dhacay shalay degaanka Abaarso ee dhanka galbeed ee magaalada Hargeysa. Maydadka iyo dhaawaca ayaa la keenay cisbitaalka guud ee magaaladda Hargaysa.
Dhinaca kale Cisbitalka ayaa sidoo kale la ‘ keenay maydka nin ku dhacay ceel ku yaal deegaanka Isha Gobka ee koonfurta magaalada Hargaysa. Sidaasi waxaa warbaahinta u xaqiijiyay mid ka mid ah saraakiisha caafimaadka. Shilalka gaadiidka ayaa ku badan Guud ahaanba Somaliland kuwaasi oo ay sababaan waddo xumo iyo xirfada wadayaasha gaadiidka oo qaar kood ay liidato.